Endri-javatra 6 tokony hananan'ny mpilalao mozikao | Avy amin'ny Linux
Ho an'ireo mpankafy mozika, manana mpilalao marobe i Linux ary tsy ho fantatrao izay safidinao. Izany no antony ilainay ny manonona fiasa sasany izay heverinay fa ilaina amin'ny mpilalao mozika tena tsara.
1 Ny mpilalao dia tokony ho azo alamina mba hanafarana ny mozika tsy misy fanovana
2 Ny mpilalao dia tokony hanana ny fampiasa "playlist mahay"
3 Ny mpilalao dia tsy tokony hanery ny mpampiasa hifandray tsy tapaka amin'ny playlists
4 Ny mpilalao dia tokony hanana fomba tsotra hampidirina sary manarona
5 Tokony hasehon'ilay mpilalao ny taha mahomby raha mbola mandeha ny mozika
6 Ny mpilalao dia tokony hanana fandaminana, famolavolana ary fampisehoana tena tsara
Ny mpilalao dia tokony ho azo alamina mba hanafarana ny mozika tsy misy fanovana
Io dia ahafahan'ny mozika manova ny taha sy ny halaliny amin'ny sidina. Mora ihany koa ny mametraka ny signal amin'ny mpanova audio digital nomerika, izay natokana ho an'ny playback mozika hi-fi ary afaka mampiasa headphone tsara.
Ny mpilalao dia tokony hanana ny fampiasa "playlist mahay"
Satria rehefa any amin'ny fety ianao, mihaona amin'ny namanao na mahandro sakafo, dia mitohy maneno ny hira tsara izay mifanentana ary mahafinaritra ny fotoana.
Ny mpilalao dia tsy tokony hanery ny mpampiasa hifandray tsy tapaka amin'ny playlists
Ny hevitra dia ny ahafahanao manindry indroa amin'ny rakikira iray ary milalao azy, tsy mila fanindriana fanampiny hanovana ny lisitry ny playlist.
ENy mpilalao dia tokony hanana fomba tsotra hampidirina sary manarona
Diso fanantenana amin'ity olona ity ny olona sasany. Tian'izy ireo ny manana ny lohaheviny miaraka amin'ny fonony marina ary ny hevitra dia ny mandray ny sary tsotra ilay mpilalao hampiditra azy ireo tsy misy olana. Amin'izany fomba izany dia tsy mila manova programa ianao raha te hahita ireo hira misy ny sary marina.
Tokony hasehon'ilay mpilalao ny taha mahomby raha mbola mandeha ny mozika
Satria tiantsika ho fantatra ary marina ny zava-drehetra.
Ny mpilalao dia tokony hanana fandaminana, famolavolana ary fampisehoana tena tsara
Ny tolo-kevitra sasany dia: Guayadeque, QuodLibet, Gmusicbrowser, DeaDBeeF, Audacious, Rhythmbox. Na izany aza, te-handre ny hevitray sy ny tolo-kevitrareo izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fomba fiasa 6 tokony hananan'ny mpilalao mozika anao
Jose de Costa dia hoy izy:
Mampiasa Qmmp aho, tena tsara izany
Valiny tamin'i Jose de Costa
vanderbeer dia hoy izy:
Mamaly an'i vanderbeer
Ka loza aho, tsy mitaky na inona na inona aho, ny hany angatahiko dia ny manaiky ny endrika rehetra ary tsy mijanona, vao mainka mitendry mozika amin'ny VLC xDDD aho.
Sayonara zaza… .. Guayadeque koa tena tsara
Fomba fijery manokana:
Rhythmbox, hampita ny mozikako amin'ny mpamaky ahy ivelany. Vita tsara ny asany.
Banshee, mba hitazomana ny fampirimana mozika milamina, ny mpilalao dia mametra ny tenany amin'ny fampisehoana ireo hira voalahatra ao amin'ny interface-ny fa tsy ao anaty fampirimana ao anatiny.
Clementine, ny findaiko ho fanaraha-maso lavitra. Amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara ny rindranasa Android ary manana fahafaha-manao maro.
Mampiasa Clementine aho; tena tsara. Na izany aza, heveriko fa tsy misy maharesy an'i Amarok kinova 1.4.
Mamaly an'i nacho
Iray izay nandalo dia hoy izy:
Miombon-kevitra amin'i Nasher_87 aho: VLC rulesz!
Ankoatr'izay miaraka amin'ny VLC dia afaka mamorona playlists ianao, manova ny sary fonony, mahita ny bitrate, manitsy ny metatags,… ary mihaino ny mozika, izay no ampiasako azy.
Valio tamin'izay nandalo
Mpampiasa Amarok etsy. Marina fa tsy fahazarana bebe kokoa noho ny nandresen'ny tanteraka ny kinova 1.4 ary sarotra ny nanova ny 2. Fa izao dia miasa miaraka amin'ireo endri-javatra rehetra nananany sy ny maro hafa.Raha ampiako MP3 dia havaozina ho azy ny tahiry, raha diso ny metadata, ampiasao MusicBrainz hanitsiana azy, dia mitady ho azy ilay fonony, ary mampiasa ny Google Images aza raha ilaina (vitsy Indraindray diso izy io, ary raha sendra azoko atao ny mandray azy amin'ny tanana) dia miasa mora amin'ny fitaovana MTP izy io, manana ny safidin'ny lisitra mandeha ho azy (izay tsy nampiasako mihitsy), mifehy ny mozika amin'ny klavier aho amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana eran-tany na ny fanalahidy multimedia ary mampiasa KDE Connect aho hampiasa ny finday fanaraha-maso lavitra. Ka ... mpampiasa faly eto
tux dia hoy izy:
Mampiasa sahisahy aho, clementine, vlc ary koa mplayer 🙂
Mamaly an'i tux
MapHSV dia hoy izy:
Ampy ho an'ny filako VLC.
Valiny amin'ny MapHSV
Amin'izao fotoana izao dia leo ireo programa rehetra ireo aho, mpd + ncmcpp tsotra izao no ampiasaiko ary raha telefaona finday aho dia mifehy ny mozika tiako hilalaovana eto na manampy azy ireo amin'ny lisitra na dingana teo aloha, mamorona lisitra aho ary mameno izany fotsiny vonona hilalao.
ps: Sasatry ny manandrana sy mizaha toetra aho, ary ho ahy dia izao no vahaolana tsara indrindra.
Ny marina satria mampiasa Spotify aho dia apetrako ireo mpilalao ireo. Io spotify ao amin'ny Ubuntu sy Linux io dia tsy manana fanohanana mitovy amin'ny Mac sy Windows.
Fa fampiharana tena tsara izy io, talohan'io niaraka tamin'i Clementine io no mpilalao tsy niasa ahy.
Mpampiasa isan'andro ny Amarok 1.4 aho
Saingy taorian'ny nifindrako tany Amarok 2 dia nitady fomba hafa aho ary tonga tany Clementine. hatrizay dia io no mpilalao tiako indrindra.
Niezaka ny Kubuntu 15.04 Beta2 aho ary mamela anao ny hevitro;)